December 2020 - Babal Khabar
Dec312020 by बबाल खबरNo Comments
बागलङ्गको बडीगाढ गाउँपालिकामा एउटा यस्तो बालक छन् । जस्लाई देखेर कोही गाउँलेहरु भूत भन्दै तर्सिन्छ भने कोही यस्तो पनि किन बाँचेको होला भनेर श्राप छन् रे । सबैबाट हेला पाएर पनि बाँचिरहेका ती बालक हुन् रमेश परियार । उनी १५ वर्षका छन् । उनकी आमाको भनाई अनुसार उनी जन्मिएको १० दिनपछि उनको छालामा देखा परेको सम'स्याका कारण अहिले रमेशको पुर्ण रुपले कालो भईसकेका छन् । कालो छाला हुनु स्वभाविक नै हो । हाम्रो गाउँघरमा धेरै त्यस्ता कालो वर्ण गरेका मानिसहरु छन् । तर रमेशको छाला भने कालो मात्र नभएर उनी कु'रुप पनि छन् । उनी शुरुमा झ्वाट्ट हेर्नेहरु साँच्चै तर्स'न्छन् । भाई बहिनीहरुमा माईलो रमेश छाला रो'गी हुनुका साथै अपां'ग पनि छन् । उनको शरीरै भरी घा'उहरु छन् । जस्को कारण उनी सामान्य मानिस जसरी हिं'ड्डुल गर्न भने सक्दैनन् । उनी एउटा लौरोको साहारामा आफ्नै घरआँगनमा हिंड्छन् । रमेशको उप'चारको
पत्याउन मुस्कीलः यी १८ वर्षीय युवकको पेटमा हुर्किँदैछ ४ महिनाको बच्चा
काठमाडौं । आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सबैभन्दा विशेष पल हुन्छ । किनकी उनको शरीरभित्र उनको आफ्नै अंशको रुपमा नयाँ मान्छे बढिरहेको हुन्छ ।तर के तपाईंले कहिल्यै कुनै पुरुषले समेत यस्तै मातृत्वको अनुभूति गर्न पाएको देख्नुभएको छ ? सायद छैन होला । किनकी पुरुषहरु आमा बन्न सक्दैनन् ।तर अमेरिकामा चाहिँ एउटा अनौठो मामिला सार्वजनिक भएको छ । एकजना १८ वर्षीय अमेरिकी युवक ग'र्भवती भएका छन् । अहिले उनको कोखमा ४ महिनाको भ्रू'ण हुर्किरहेको छ । ती युवकको ग'र्भ रहेको तस्वीर पछिल्लो समय सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । उनको नाम मिकी च्यानेल हो । उनी अमेरिकाको बोस्टन सहरमा बस्छन् । उनी पुरुष हुन् तर उनको शरीरमा प्र'जनन प्रणालीचाहिँ महिलाको छ । सोही कारण उनले ग'र्भा'धारण गरेका हु न् . कीको जन्म पु'रुषकै रुपमा भएको थियो । उनकी आमाको गर्भको जाँच गर्दा ग'र्भमा छोरी रहेको डा'क्टरहरुले बताएका थिए । तर
ब्यानर पोष्ट, विचार
फाइबर, भिटामिन बी–६, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जस्ता पोषक तत्वले भरिपूर्ण खजुर स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। खजुर शरीरका लागि निकै फाइदा जनक छ। जसलाई सही तरिकाले खान आवश्यक छ। एक दिनमा ५ खजुरभन्दा धेरै खाँदा स्वास्थ्यका लागि नोक्सान गर्न सक्छ। आज हामी तपाईलाई खजुर खाने सही तरिका र फाइदाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । खजुरवाला दूध १ गिलास गाईको दूधमा ३ वटा खजुर राखेर उमाल्नुहोस्। उम्लिसकेपछि ग्यास सानो बनाएर त्यसलाई त्यत्तिकै ५ मिनेटसम्म छोडि दिनुहोस् । त्यसपछि यसलाई मनतातो भएपनि पिउनुहोस्। के के छन् त खजुर दूधका फाइदा ? बच्चाले ओछ्याउनमा पिसाब गर्ने सम स्या हटाउँछ यदी तपाईको बच्चाले राति ओछ्याउनमा पिसाब गर्ने समस्या छ भने बिहान खाली पेटमा खजुरवाला दूध पिलाउनुहोस्। ध्यानदिनुहोस यदी बच्चा ५–१० वर्षबीचको छन् भने उनीहरुलाई १, २ वटा खजुरमात्र दिनुहोस् । १० वर्षमाथिका छन् भने
अण्डालाई कहिलै नपकाउनुहोस् यसरी, नत्र निम्तिन सक्छ यस्तो खत’रा
अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डा चाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरैले रुचि पूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू ढुकुर, कालिज तथा तित्राका अण्डा पनि निकै रुचाइन्छ । यसो भनौँ, मानिसहरू पाएजति पन्छीका अण्डा खान बाँकी राख्दैनन् । ती सबैका अण्डामा केही फरक विशेषता हुने भए पनि सामान्यत सबैमा एकै प्रकारको गुण पाउन सकिन्छ । ‘सन्डे होस् वा मन्डे, रोज खाओ अण्डे’ भन्ने हिन्दी भनाइ छ । यो भनाइले अण्डा खान प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । अण्डा खाँदा हुने फाइदा र बेफा'इदाको बारेमा पनि हामीलाई धेरैले बताउने गर्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ स्वस्थ शरीरका लागि दिनमा कतिवटा अण्डा खानु उचित हुन्छ ? अनि यसलाई कसरी पकाउनु पर्छ ? चीनमा झण्डै दश लाख मानिसमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार दिनमा कम्तीमा एउ
हस्त शास्त्रमा हातको रेखाको विशेष महत्व हुन्छ। व्यक्तिको भाग्य यिनै रेखासँग जोडिएको हुन्छ। तपाइँको बैंक ब्यालेन्सदेखि लिएर सफलताको राज हातको यिनै रेखामा लुकेको हुन्छ। आज हामी तपाइँलाई हातमा बनेको यस्तो रेखाका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जसको हातमा यो रेखा छ, उसको भाग्य चम्किन्छ। त्यसो त व्यक्तिको हातमा कयौं प्रकारका रेखा हुन्छन्। तर हातमा बनेको ‘भी’ आकारको चिन्ह निकै राम्रो मानिन्छ। हस्तशास्त्र विद्वानका अनुसार यस्तो रेखा हुने व्यक्तिमाथि भगवान विष्णुको विशेष कृपा हुन्छ। यो पनि पढ्नुहोस यस्ता सामानहरू तुरून्तै घरबाट निकाल्नुहोस्, नत्र हुनेछ नसोचेको ठूलो हानी अहिल्यै होसियार हुनुहोस्: यस्ता गल्तीले गर्दा सुतेको ठाउँमै मरियला अवश्य पढ्नुहोला यो रेखा हृदय रेखाको माथि चोर औंला माझी औंलाको बीचमा हुन्छ। यो रखाको एउटा सिरा चोरी औंलामा गुरु पर्वतको अगाडि तथा दोस्रो रिसा गुरु पर्वतक
बिचौलियाले लियो उखु किसानको ज्यान: २० बिघा जमिनका मालिक खल्तीमा २२ रुपैयाँ बाँकी भएर बिदा भए !
झण्डै २० बिघा जमिन भएका किसान नारायण राय यादवले झेल्नु परेको आर्थिक दु'रावस्थाले नेपालमा किसानहरुको समग्र अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७, छोटौलका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादवको गत मंगलबार काठमाडौंमा हृद'याघा'तका कारण मृ'त्यु भयो । चार वर्षदेखि चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि उखु कृषकको आन्दो'लनमा सामेल हुन उनी केही साता अघि काठमाडौं पुगेका थिए । आ'न्दोलनरत किसानका कथित अगुवा र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएपछि उनले आफू फेरि ठ'गिएको अनुभूति गरे । किनकि, यस्तै सहमति गत वर्ष पनि भएको थियो तर पैसा अझै हात लागेको थिएन । गत वर्षको सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण यो वर्ष फेरि आ'न्दोलन गर्नु परेको थियो । ऋ'णमाथि ऋ'णको भार बढ्दै जानु, अर्कोतिर उधारो सहमतिका साथ आ'न्दोलन स्थगन गर्ने तयारी हुनुले उनमा अ'सह्य पी'डा भएको पीडि'त परिवारजन बताउँछ । ‘यो पटक त प
रीमाले किन भनिन , ‘सिंगल हुँदैमा मरिँदैन’ ?
भिनेत्री रीमा विश्वकर्मा अभिनय भन्दा पनि कार्यक्रम उद्घोषणको कारणले चर्चामा छिन् । रियालटी शो ‘नेपाल आइडल’ र ‘कमेडी च्याम्पियन’ उनले उद्घोषण गर्दै आएकी छन् । फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गर्दै आएकी उनी अभिनित फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ केही पहिले रिलिज भएको थियो । तर उनले अभिनय भन्दा बढी चर्चा रियालटीशोबाट पाउने गरेकी छन् । अभिनय होस् वा रियाटली शो उनी जहाँ रहेपनि मिडिया तथा प्रशंसकको एउटा प्रश्न भने सधैँ तेर्सिने गर्दछ – विवाह कहिले गर्ने ? यो पनि अहिल्यै होसियार हुनुहोस्: यस्ता गल्तीले गर्दा सुतेको ठाउँमै मरियला अवश्य पढ्नुहोला साउदीमा एक नेपाली युवती झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला ! अहिले एक प्रशंसकले पनि उनलाई इन्सटाग्राम मार्फत् यहि प्रश्न राखेका छन् । जसको जवाफमा उनले लेखेकी छन्, ‘सिंगल हुँदैमा मरिँ दैन । हतारमा रिलेसन सिपमा बस्नु पनि ठीक हुँदैन । त्यसैले मैले यो फैसला समयलाई
Dec302020 by बबाल खबरNo Comments
अहिल्यै होसियार हुनुहोस्: यस्ता गल्तीले गर्दा सुतेको ठाउँमै मरियला अवश्य पढ्नुहोला
सुतेको सु'त्यै भएछ, बिहान उठ्दै उठेन’, ‘सुत्दा राम्रै थियो, मध्यरातमा ऐया नभनी बितेछ’, ‘अलि–अलि र’क्सी पिएर सुत्या हो, बिहान आँखै खोलेन, अस्प’ताल पुर्‍याउनै भ्याइएन ।’ यस्ता घट’ना धेरै सुन्नमा आइरहन्छन् । ठूला–ठूला नाम भएका व्यक्तिहरुको यसरी मृ 'त्यु हुँदा अझ बढी चर्चा हुने गर्छ । विष पिलाएर मा’र्‍यो होला, धेरै र क्सी पियो होला, ड्र’ग्स लिने बानी थियो, धेरै तान्यो होला भनी अड्कलबाजी गर्ने चलन छ । धेरै चर्चित कलाकारहरु, राजनीतिज्ञहरु र समाजका चिरप’रिचित व्यक्तिहरु राति राम्रै अवस्था’मा सुतेका तर बिहान हुँदा ओछ्यानमै मृ’त अवस्थामा पाइएका थुप्रै घट’ना छन् । यसको पछाडि के रहस्य छ ? खोतल्ने प्रयास गरेको छु । मानिसको मृ’त्यु हुने मुख्य कारण मुटुको धड्कन ब’न्द हुनु हो । यसलाई कार्डि'याक ए'रेस्ट भनिन्छ । यो अवस्था हृद’यघात भएमा अथवा मुटुको धड्कन अत्यधिक बि'ग्रिएमा उत्पन्न हुन्छ ।
यस्ता सामानहरू तुरून्तै घरबाट निकाल्नुहोस्, नत्र हुनेछ नसोचेको ठूलो हानी
हामी आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन विभिन्न उपाय गर्दछौ । तर कतिपय अवस्थामा जानी नजानी गरेका केही गल्तीले हामीलाई विभिन्न दोष लाग्ने र स'मस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ ।आज हामी वास्तुशास्त्र अनुसार घरभित्र हुने केही चीजबारे चर्चा गर्नेछौ जसले वास्तु दो'ष निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ यी सामाग्रीलाई घरभित्र राख्नु अशुभ मानिन्छ । १. भा'चिँएको फर्नीचर भा'चिँएको वा टू'टफुट भएको फर्नीचर सामाग्रीलाई घरभित्र राख्नु अ'शुभ हुन्छ । यसले वैवाहिक जीवनमा क'लह निम्याउने वास्तुशास्त्रको मान्यता छ । तसर्थ यस्ता सामाग्रीलाई सकेसम्म घरबाहिर राख्नु नै राम्रो हुन्छ । २. बि'ग्रेको घडी यदि घरमा कुनै बिग्रिएको, चर्कि'एको वा टुटफुट घडी छ भने यसलाई समेत घरभित्र नराख्नुहोस् । बि'ग्रिएको वा रोकिएको घडीले नका' रात्मक ऊर्जा पैदा गरी परीवारका सदस्यको काममा अड्च'न पै'दा गर्दछ । ३. बि'ग्रिएका विद्युतीय सामान बिग्रिएको वा काम नला
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे फोन, फोन गर्नुको कारण भने यस्तो
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले उ'पचारका लागिअ स्प'ताल भर्ना भएकी नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको स्वा स्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर स्वा'स्थ्य अवस्था बारे जान कारी लिएका हुन्। पार्की न्सन्स को स'मस्यालेपी डित प्रचण्ड पत्नी सिता बुधबार मेडी सिटी अ'स्प ताल भर्ना भएकी हुन्। सितालाई फलो अपका लागि अस्पता'ल ल्याइएको र अव्ज र्भेसनमा राखिएको अ'स्पताल स्रोतको भनाई छ। यो पनि सोचे झैँ गीतकी गायिका सोचे झैँ नेपाल रहेन छ भन्दै भाबुक हुदै लागे बिदेस तिर ! ओली र ज्ञानेन्द्र एकै रहेछन् भन्दै माधव कुमार नेपालले गरे यस्तो अनाैठो खुलासा ! सितालाई भेट्न अर्थमन्त्री एवम् ने कपा महा सचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ मेडि सीटी अस्प'ताल पुगेका थिए। पौडेल र नेम्वाङ पुग्दा प्रचण्ड अस्पता'लबाट बाहि रिस केका थिए।